U-Yasmin Wijnaldum ohamba ze kunye ne-Sexy Pics Collection - I-Celeb Ehamba Ze
U-Yasmin Wijnaldum ohamba ze kunye ne-Sexy Pics Collection
Jonga imodeliU-Yasmin Wijnaldum uhamba zeImifanekiso engamanyala, iifoto zakhe zepaparazzi zebikini, isiliphu sokwenzeka ngoSeptemba kulo nyaka kunye nezinye ezininzi! Siqokelele yonke imifanekiso kaJasmin emnandi kwigalari enye, kubo bonke abalandeli beMostra Musa kunye nabalandeli bobuhle bamaIndiya. Ulibhityile kwaye uneengono ezimnyama ezimnyama ndingathanda ukuncanca, ke konwabele ukubukela ii-boobs zakhe kunye neesile apha ecaleni komnye abadumileyo nudes !
U-Yasmin Wijnaldum (oneminyaka engama-21) ungumzekelo wefashoni waseDatshi kunye neVictoria's Secret Angel. Uvela eAmsterdam, kodwa ngoku uhlala kwaye usebenza eNew York. UWijnaldum usebudlelwaneni kunye nommeli waseMelika G-Eazy , yintoni eyamenza waduma nangakumbi. Wakhethwa njengenye yeemodeli ezili-11 ekufuneka uyazi ngeVogue Arabia. U-Yasmin okwangoku ubekwa njengenye yeemodeli ezingama-50 eziPhezulu kunye neeModeli eziBalaseleyo kwezesondo.
I-Yasmin Wijnaldum imifanekiso enganxibanga
Ngaphandle kwemifanekiso eshushu kaYasmin, songeze iifoto ezintsha zeYasmin Wijnaldum nip isiliphukwiBhola yeDayimane yoNyaka exhamla kwiClara Lionel Foundation eCipriani Wall Street kwisiXeko saseNew York. Wayenxibe igawuni egcwele amakristali kwaye wavela nesoka lakhe uG-Eazy.
Yasmin Wijnaldum nip isiliphu
Imifanekiso yeebikini ze-Yasmin Wijnaldum
Iifoto ze zejoseline hernandez
belle delphine iifoto zesnapchat
catherine zeta jones amabele